Nepal Dayari | भुन्टी, कान्छी जस्ता चर्चित सिरियलकी कलाकार आशा खड्कालाई के भयो फेरी ? हेर्नुहोस भिडियो
साउन ७, २०७८ बिहिबार १६७७ पटक हेरिएको
भुन्टी, कान्छी जस्ता चर्चित सिरियलकी कलाकार आशा खड्कालाई के भयो फेरी ? भिडियो अन्तिममा छ कृपया पूरा हेरि प्रतिक्रिया दिनुहोला।
यो पनि पढ्नुस् : सचिन परिवारका हजुरबुबा र हजुरआमालाई द’माई भन्दै रातिमा घरबेटीले कु’टेका छन्। ६० बर्ष पुगेका वृद् बुबाआमालाई जा’तको कुरा लिएर चि’र्पटले हानेको कुरा अहिले सामाजिक संजाल भरि सार्बजनिक भएको छ। रातको ९ बजेको समयमा आफ्नो घर जादै गरेका बुढाबुढी माथि दमाई हाम्रो घरमा किन बसेको भन्दै उनिमाथि प्र’हर भएको हो। लामो बाटो थ’काइले गर्दा उनीहरु त्यो घरको दिलमा बसेका थिए।
आफ्नो बुबा आमाको यस्तो खबर सुन्दा सचिनको बुबा तेजेन्द्र परिवार आ’क्रोशमा आएका छन्। मेरा बुबाआमाले अहिलेसम्म कसैसंग कुनै लेनदेन,कुनै रि’सराग गरेका छैनन् मेरो बुबाआमामाथि यति ठुलो आ’रोप लगाउन पाइदैन। मैले यो के’शलाई त्यसै ह’राउन दिने छैन ,म प्रसासन ,अ’दालत जहा सम्म पुगेपनि दो”षीलाई स’जाय दिएरै छोड्छु भनेका छन्।